Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » FLYING WALES: Ụgbọ elu ibu ibu n'ụwa
FLYING WALES ewepụtala ụzọ ọhụrụ, dị ọnụ ala na enyi na gburugburu ebe obibi iji bufee ibu buru ibu na mpaghara nnukwu ma ọ bụ dịpụrụ adịpụ.
Ụlọ ọrụ Franco-Quebec FLYING WALES, nke na-emepụta, na-emepụta ma na-arụ ọrụ ụgbọ elu ibu ibu n'ụwa (LCA60T), na-akwado ịzụlite ọrụ ya na Quebec.
Nhazi nke ihe ndị na -ekenye ndị ọzọ
Iji ruo ihe dị ịrịba ama achọrọ maka inweta akwụkwọ ikike ọrụ ya, FLYING WALES na-ekwupụta na ọ na-ahazigharị usoro ndị nwe ya.
Na Septemba 9, 2021, AVIC GENERAL, rere mbak ya nhata nha 24.9% na FLYING WALES, site na AVIC GENERAL France, nye ndị na-eketa ego France ugbu a bụ ndị otu ụlọ akụ France sonyere Oddo.
N'ihi nke a, ndị nwe obodo French na ndị nwe onwe nwere 75% nke FLYING WHALES na Quebec nwere 25% site na Investissement Québec (IQ). Enyemaka Montreal "Les dirigeables FLYING WALES Québec" bụ 50.1% nke FLYING WALES nwere yana 49.9% nke IQ.
Quebec: Ebe obibi na America
Ebumnuche nke alaka Montreal bụ ịbanye na ngalaba ikuku ụgbọ elu Quebec wee soro ndị egwuregwu guzosiri ike na nke a pụrụ ịdabere na mpaghara ahụ iji wulite na ụfọdụ uru atụmatụ LCA60T. Mwekota a ga-enyere aka itolite ụlọ ọrụ ikuku ụgbọ elu Quebec, ọkachasị n'ihe gbasara ume ọhụrụ na ụyọkọ akụ na ụba a bụ isi.
FLYING WALES ga-akwado ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Quebec maka ahịrị mgbakọ nke ụgbọ elu LCA60T zuru oke maka America. A na -amụ ọtụtụ saịtị. Saịtị ahọpụtara ga-ewepụta LCA60T niile ezubere maka America. Nke a na-anọchite anya iri puku kwuru nde ego itinye ego na, n'ikpeazụ, imepụta ihe dị ka ọrụ 200 dị mma, na-akwụkwa ụgwọ nke ọma.